onlineakhabar.com: OMG !! मुटु कमजोर हुनेले नहेर्नुहोस्,, यस्तो डरलाग्दो दुर्घटनामा परेकालाई डाक्टरले बचाए
Amazing Video, Amazing World, India News » OMG !! मुटु कमजोर हुनेले नहेर्नुहोस्,, यस्तो डरलाग्दो दुर्घटनामा परेकालाई डाक्टरले बचाए
OMG !! मुटु कमजोर हुनेले नहेर्नुहोस्,, यस्तो डरलाग्दो दुर्घटनामा परेकालाई डाक्टरले बचाए
एक नितीश नाम गरेका व्यक्तिको घाँटीमा आर पार अवस्थामा हँसियाले घोचेको थियो । शरीर बाट रगत तिब्र गतिमा निस्किरहेको थियो र उनि मृत्युको मुखमा नै पुगेका थिए । यस्तो अवस्थामा डाक्टर भगवानको रुपमा उनलाई नयाँ जिवन दिन सफल भएका छन् । यो घटना भारतको उत्तर प्रदेशको बिहारको हो ।
हालत देखेर डाक्टरहरु पनि डराए..
- घाँटीमा हँसिया घुसे देखि नीतिशको शरीरबाट धेरै रगत बगेको थियो । उनका परिवारवालाहरुले तुरुन्त नजिकैको एक क्लिनिकमा पुर्‍याए । जहाँ डा. संजय कुमारले नीतीशको हालत देख्नासाथ अपरेशनको फैसला गरेका थिए । डा. संजयका अनुसार नितिसको शरिर बाट धेरै रगत बगेको थियो र उनको हालत देख्दा डाक्टरहरु समेत डराएका थिए । लागेको थियो उनको ज्यान बच्न मुल्कील छ ।
यूपी बेगूसराय जिल्लाको बखरी इलाकाको सोनमा गाउँको हो । नीतीश बिहिबार घाँस काट्नको लागि एउटा रुखमा चढेका थिए । त्यसै क्रममा रुखको हाँगा भाँच्चिएर उनी जमिनमा खस्न पुगे नीतीश जहाँ खसे त्यहाँ पहिलै एउटा हसिया थियो । त्यही हँसियामा खस्दा हँसियानै उनको घाँटीको वारपार हुन पुगेको थियो ।
अहिले पनि नितिसको स्वास्थ्य खराब नै
डाक्टर संजयका अनुसार, हँसिया निकाल्नको लागि त्यसको बेसलाई काटिएको थियो त्यसपछि मात्र हँसिया निकालिएको थियो । हँसिया निकाले पछि छतिग्रस्त वेन्स र नर्भसलाई ठिक गरिएको छ । धेरै रगत बगेका कारण उनको ब्लड प्रेसर लो भएको जसकारण उनलाई ब्लड प्रेशर बढाउने औषधी खुवाएको छ । त्यही धेरै रगत बगेका कारण नितिशको हालत अहिले पनि नाजुक नै छ । अहिले उनलाई औषधीको साथ साथै भगवानको आशिर्वादको पनि खाँचो छ ।
Watch : गले के आर-पार हुआ हसुआ, देखें फिर हुआ क्या?http://www.bhaskar.com/news-fbo/c-268-790149-pt0171-NOR.html
Posted by Dainik Bhaskar on Friday, April 8, 2016
Tags : Amazing Video Amazing World India News